धुर्मुस–सुन्तलीलाई खुल्ला दिलले सहयोग गर्न महजोडीको आह्वान, नेताहरुलाई धुर्मुस–सन्तुली चुनौति
Wed, Feb 26, 2020 at 12:42pm
शनिबार, १ माघ २०७३,	आहाखबर	2.91K
आरके महतो/बर्दिबासः हास्यकलाकार महजोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्य)ले धुर्मुस–सुन्तलीको नामबाट परिचित हास्य कलाकारद्धय सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई सबै नेपालीले खुलेर सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
कट्टेल र घिमिरेले खडा गरेको संस्था धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण कार्य थालेको बर्दिवासस्थित एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती स्थल पुगेका मह जोडीले धुर्मुस र सुन्तलीले थालेको देश निर्माणको काम सिङ्गो कलाकारिता क्षेत्रले गर्व गर्न लायकको रहेको बताए ।
देश बनाउन हिडेका धुर्मुस र सुन्तलीलाई देश विदेशमा रहेका सबै नेपालीले खुलेर सहयोग गरिदिन महजोडीको आग्रह थियो । रकेटको गतिमा काम भइरेको भन्दै मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘पुस २५ गते शिलान्यास गरेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्तीको निर्माणको काम पाँच दिनमै निकै अघि बढेछ । काम कसरी अघि बढ्छभन्ने दृष्टान्त बनेको छ ।’
धुर्मुस र सुन्तलीले दर्शक मात्र नहसाएर अहिले विकासको काम गरेर देशैलाई हसाइरहेको उनले बताए । पचास वटा घर बन्ने भनेकोमा तीमध्ये २० वटा घरको जग हालेर दण्डी ठडिएको देख्दा अच्चम्मित भएको भन्दै हरिबंश आचार्यले भने, ‘जांगरिला हातको कमाल देखियो । धुर्मुस—सुन्तली बस्ती बनाउनुको साथै सबै नेपालीको मन जोड्न तराई झरेका हुन् ।’
काम सुरु भएको सय दिनमै घर हस्तान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ । यति थोरै अवधीमा ५० वटा घर हस्तान्तरण हुन सक्ला...!? भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा मदनकृष्ण ले भने, ‘यहाँको काम गराइले तोकिएको अवधीमै घर हस्तान्तरण हुन्छ । हुनुपर्छ । हेर्नुस् त काम गर्दा हुने रहेछ नी । ढिला सुस्तीले देश विकास हुन सकेको छैन । शिलान्यास गर्न आउँदा खाली थियो । पाँच दिनमा आउँदा २० वटा घरको जग खनेर १० वटा घरको त पिलरै हाल्न सुरु भएको छ ।’
दैनिक झन्डै दुई सय कामदार खटेर जाडो मौसममा बस्ती निर्माणको काम गरिरहेका छन् । पैंसटठी जना गाउँलेले श्रमदान गरिरहेका छन् । विगतमा बोल्न बाहिरका मानिसहरुसँग बोल्नसमेत लजाउने विशेषगरी मुसहर महिनाहरु नमस्कार गर्न र कुरा गर्न सिकेको पाएको भन्दै महजोडीले परिवर्तन सम्भव रहेको बताए ।
महजोडीले भने, ‘कलाकारिताहरु समाजसेवा र देश निर्माणको काममा जुटेका छन् । अब देश निर्माण गर्छौं भन्नेले के गर्लान्...? मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘चिन्ता गर्नु पर्दैन देश निर्माण गर्छौ भन्नेहरुले । धुर्मुस–सुन्तली पहरी र गिरान्चोर सकेर मुसहर बस्ती आएका छन् । यो सकेर कहीं जालान् । बाँकी सिंगै नेपाल देश बनाउँछौं भन्नेका लागि खुला छ ।
नेपाली जनताले देश विकास, समृद्धि र शान्ति खोजि रहेका छन भन्दै उनले देशलाई सुन्दर बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ भने । हरिबंशले थपे, ‘देशमा काम गर्नु पर्ने क्षेत्र विशाल छ । बनाउँछौ भन्नेहरुले संकल्प गरेर अघि बढे हुन्छ । हामी पनि सकेको सहयोग गर्न पुग्छौं ।’
मदनकृष्ण श्रेष्ठले हाम्रो हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा मान्छे (दर्शक) हँसाउने मात्र हैन, देश हँसाउने पात्र छन् भन्दै धुर्मुस र सुन्तलीको अभियानको सिको नेताहरुले नगरे नेताहरुको भोट गुम्छ भने । धुर्मुस–सुन्तली नेताहरुको लागि चुनौति सावित भएको उनको भनाई थियो ।
मदनको कुरामा हरिबंशले भने, ‘मदन दाइले भन्नु भयो नि । हामी हाम्रो नयाँ पुस्ताप्रति गर्व गछौं । धुर्मुस र सुन्तलीबाट देश बनाउने ज्ञान सरकारले सिकोस । बर्सौंदेखि रोग, भोक र अशिक्षाले पछाडी परेका महोत्तरीको बर्दिबास– २ स्थित मुसहर बस्तीको मुहार फेर्न एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती नाम परियोजना अघि बढाएर धुर्मुस—सुन्तली फाउण्डेसनले काम थालेको छ । बस्ती बनाउन चार करोड ७८ लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।